Mampihatra mpamatsy sy orinasa ny fambolena - Manamboatra mpamokatra ny fambolena any Sina
Product Detail 3Z series disc ridger dia ampiasaina amin'ny sehatry ny ovy sy legioma. Izy ireo dia manana ny toetran'ny halaviran-dàlana avo lenta, fanitsiana zoro mety, elanelam-peo manohana ary fampifanarahana matanjaka. Ny takelaka vy manganese lohataona avo lenta 65 dia ampiasaina amin'ny angadinomby. Aorian'ny fitsaboana hafanana, ny hamafiny dia 38-46 HRC, elastika tsara sy hamafisana, fahombiazan'ny fidirana amin'ny tany, fihodinan'ny tany, kalitao manarona dia afaka mameno ny fepetra ara-teknikan'ny fambolena ...
Product Detail Ny rafitra dia mitombina ary ny fandidiana dia miovaova, izay mety amin'ny fitaterana an-dalambe sy an-tsaha. Ohatra, ny tranofiara 2 taonina dia manana traktera 12-25 HP, ary ny frein kosa dia mety ho lozam-pifamoivoizana, frein mekanika na rivotra frein. Fialan-tsasatra havia sy havanana azo alaina na fanariana telo. Volavola manify: takelaka tsipika elastika. Fomba entina manintona: tripod mivantana mivantana. Fitsaboana ety ivelany: milina fanapoahana tifitra lehibe hamongorana ny adin-tsaina, ny fanesorana, ny famonoana ...
Antsipiriany momba ny vokatra Ny mpamboly rotary miaraka amin'ny nify mihety dia toy ny faritra miasa dia antsoina koa hoe mpamboly rotary. Araka ny fikirakira ny axis rotary dia azo zaraina amin'ny karazana axis marindrano sy ny karazana axis mitsangana. Ny mpamboly lozisialy axis horizontal miaraka amina axis horizontal dia be mpampiasa. Ny fanasokajiana dia manana fahaizana mahery mamotika ny tany. Ny fandidiana iray dia mety hahatonga ny tany ho potipotika tsara, ny tany sy ny zezika hifangaro milamina, ary ny haavon'ny tany, izay mahafeno ny fepetra takiana ...
Product Detail 3S series subsoiler dia mety indrindra amin'ny famoahana tany amin'ny ovy, tsaramaso, landihazo ary afaka mamaky ny tany mihamafy, mamaha ny tany ary ny mololo madio. Izy io dia manana tombony amin'ny halalin'ny halaliny, amin'ny fampiharana marobe, fampiatoana mety sns. Ny subsoiling dia karazana haitao maharitra izay vita amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny milina ambanin'ny tany sy ny sehatry ny traktera Izy io dia fomba fambolena vaovao miaraka amin'ny angady ambanin'ny tany, angadinomby tsy misy rindrina na angadinomby.
Mampihatra angadinomby ho an'ny varotra ny toeram-pambolena
Antsipiriany momba ny vokatra Ny angadin-kapila dia natao hiasa amin'ny karazan-tany rehetra ho an'ny asa fototra toy ny famakiana ny tany, ny fiakaran'ny tany, ny fihodinan'ny tany ary ny fampifangaroana ny tany. Izy io dia ampiasaina hanokatra ny saha vaovao ary hanodinana ireo faritra be vato, azo ampiasaina mora foana any amin'ireo faritra be vato sy miorim-paka. Famaritana teknika maodely Unit 1LYQ-320 1LYQ-420 PDP-2 PDP-3 PDP-4 Niasa sakan'ny mm 600 800 500 800 1000 Ny halalin'ny fiasa mm 200 200 250-300 250-300 250-300 Disc diameter ...
Antsipirian'ny vokatra Ny andiana 1BQX Disc Harrow andiany maivana dia mety amin'ny hodi-biby malemy sy malemy rehefa avy niasa tany sy nandamina ny tany alohan'ny famafazana tany nambolena. Ireo milina dia afaka manamboatra ny tany sy ny zezika hifangaro, ary hamafa ny fototr'ireo zava-maniry amin'ny tany maivana na antonony ary manomana ny fandriana masomboly hambolena. Ny andian-jiro Disc Harrow andian-jiro maivana dia vita amin'ny fantsom-by mahay, Ny rafitr'izy ireo dia tsotra sy mitombina, matanjaka sy mateza, mora ampiasaina, mora ampiasaina ...
Ny antsipirian'ny vokatra 1BJX harrow disque antonony dia mety amin'ny famotehana sy famahana ireo vovo-tany aorian'ny fambolena sy ny fiomanana amin'ny tany alohan'ny famafazana. Izy io dia afaka mampifangaro ny tany sy ny zezika amin'ny tany nambolena ary manala ny fototr'ireo zava-maniry. Ny rafitra dia manana rafitra mirindra, hery goavambe, faharetana, fandidiana mora, fikojakojana mora, ary afaka mamotika sy mitondra any anaty tany amin'ny laoniny mba hampandeha ny tany, mifanaraka amin'ny filan'ny fambolena mafonja izany. Ny fitaovan'ny kapila dia 6 ...